China PE PPR ipayipi ukukhiqizwa umugqa Ukwakha futhi Factory | Jiarui
Lo mugqa wepayipi we-PE ubunjwe: Ishaja yezinto ezibonakalayo + Isikulufu esisodwa se-screw extruder + ipayipi isikhunta + i-tank calibration tank + ukufafaza ithangi lokupholisa x 2sets + umshini wesibungu wokukhipha isibungu + umshini wokusika othuli.
Umzimba wamathangi we-vacuum calibration tank wamukela ukwakheka kwamakamelo amabili: ukulinganisa kwe-vacuum nezingxenye zokupholisa. Womabili amathangi we-vacuum kanye ne-spraying tank yokupholisa amukela insimbi engagqwali 304 #. Uhlelo lwe-vacuum oluhle kakhulu luqinisekisa ukulinganiswa okuqondile kwamapayipi; ukufafaza ukupholisa kuzothuthukisa ukusebenza kahle kokupholisa; Isistimu yokulawula ukushisa kwamanzi ngokuzenzakalela yenza umshini uhlakaniphe kakhulu.
Ingakwazi ukukhiqiza amapayipi e-HDPE anobubanzi obungu-16mm kuye ku-1200mm. Ngeminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho ekuthuthukiseni nasekuklanyweni kwemishini yepulasitiki, lo mugqa wokukhiqizwa kwepayipi we-HDPE unesakhiwo esiyingqayizivele, ukwakheka kwenoveli, ukwakheka kwemishini enengqondo nokusebenza okuthembekile kokulawula. Ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene, ipayipi le-HDPE lingakhiwa njengomugqa wokukhiqizwa kwamapayipi amaningi.
Lo mugqa wepayipi we-extrusion wamukela amandla we-screw extruder owodwa osebenza ngamandla ngesikhunta esikhethekile, ukusebenza kahle kokukhiqizwa kunomugqa owodwa wokukhiqiza onejubane ukhuphuke ngo-30%, ukusetshenziswa kwamandla kungaphansi kuka-20%, futhi kunciphise izindleko zabasebenzi. Ukukhiqizwa kwamapayipi e-PE-RT noma e-PE kungabonakala ngokuguqulwa okufanele komshini.
Umshini ubungamukela ukulawula kwe-PLC nombala wesikrini esikhulu se-crystal crystal display screen esenziwe ngohlelo lokulawula, ukusebenza kulula, ukuxhumana kulo lonke ibhodi, ukulungiswa komshini, i-alamu yephutha le-othomathikhi, ukubukeka komugqa wonke, ukukhiqizwa okuzinzile nokunokwethenjelwa.
Umugqa wokukhiqizwa kwepayipi le-PPR uqukethe uchungechunge lwe-SJ olulodwa lwe-screw extruder, isikhunta, ibhokisi lomshini, ibhokisi lokufafaza, ugandaganda, umshini wokusika, ifreyimu ejikayo njalonjalo. It is ikakhulukazi esetshenziselwa ukukhiqiza PPR, PE-RT amapayipi amanzi ashisayo nabandayo, njll. Futhi ifakwe nezinye extruders kanye isikhunta ezahlukene, ezingasetshenziswa ukukhiqiza PPR kabili ungqimba amapayipi, PPR multilayer amapayipi, PPR ingilazi fibre kwaqinisa amapayipi, njll .
Main Amandla Amandla
Langaphambilini Umugqa wokukhiqizwa kwepayipi le-PVC
Olandelayo: Umugqa we-PVC we-Braided Hose Extrusion